Launcher ကို APK ကို IN Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » launchers » Launcher ကို IN အချစ် - ရုပ်ပြောင် & GIF များ, Themes
Launcher ကို IN အချစ် - ရုပ်ပြောင် & GIF များ, Themes APK ကို
လူကြိုက်အများဆုံး home screen က app ကို - တင်ပေးသူ IN - Themes, အီမိုဂျီ GIF များနှင့်စတစ်ကာများ Android အတွက်ယခုလာမယ့်နေပါသည်! အထူးတဦးတည်းအတွက်အထူးမေတ္တာတော်ကိုရုပ်ပြောင်များနှင့်စတစ်ကာများ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ရယ်စရာအီမိုဂျီ GIF များနှင့်စတစ်ကာများကိုဤနေရာတွင်သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြ IN တင်ပေးသူ၌အံ့အားသင့်စရာ -! Launcher ကိုအီမိုဂျီ Theme, Android GIF များနှင့်စတစ်ကာများအဘို့မေတ္တာကိုရုပ်ပြောင်
သင့်ရဲ့ home screen ကိုစိတ်ကြိုက်
ချစ်စရာအီမိုဂျီ GIF များနှင့်စတစ်ကာများ - 1000 ရယ်စရာအီမိုဂျီ GIF များနှင့်စတစ်ကာများထက်ပို။ ဒီရုပ်ပြောင် launcher အတွက်လှပသောမေတ္တာတော်ကိုရုပ်ပြောင်များနှင့်စတစ်ကာများ။ ဒီအခမဲ့ရုပ်ပြောင် launcher apps များ လာ. မရ။ တင့်တယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရုပ်ပြောင်သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်!
တော်တော်လေး Themes များနှင့်နောက်ခံများ - စတိုင်ရုပ်ပြောင်ဆောင်ပုဒ် & HD ကိုနောက်ခံပုံများနှင့်အတူပင်မမျက်နှာပြင်ကိုအလှဆင်။ အံ့သြစရာမေတ္တာတော်ကိုရုပ်ပြောင်များနှင့်စတစ်ကာများ မှလွဲ. လှပတဲ့ launcher ရုပ်ပြောင်ဆောင်ပုဒ်လည်းကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပါပဲ။ သင်လိုအပ်အရာအားလုံးကဒီရုပ်ပြောင် launcher ၌တည်ရှိ၏။
cool ခေါ်ရန်မျက်နှာပြင် Themes - သင့်အဝင်ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်စိတ်ကြိုက်။
အကူးအပြောင်း Effect - အေးဖန်သားပြင် switching ၏သက်ရောက်မှုလုပ်ပါ။
ဖွဲ့စည်း home screen က Make
မဖတ်ရသေးသောကို Message - သင့် apps များမဆိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်လွတ်ဘယ်တော့မှမ။
မျက်နှာပြင် Manager ကို - (ဒါကြောင့်အပေါ် add သို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်၏အရပျကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်) မျက်နှာပြင်၏ status ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်။
စမတ် Folder ကို - ဖိုလ်ဒါထဲမှာပေါ် မူတည်. screen ပေါ်မှာ app များကိုစုစည်း။
desktop က Settings - သင့်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းကိုပင်မမျက်နှာပြင် Define ။
menu ကို - ဘုံအင်္ဂါရပ်မှလျင်မြန်စွာလက်လှမ်း။
junk Cleaner - သင့်ဖုန်းပေါ်ရှိ junk ကိုရှင်းလင်း။
ဘက်ထရီ Saver - ဘက်ထရီဘဝပြင်ပနှင့်ဖုန်းအဘို့ပိုပြီးဘက်ထရီပါဝါကို save လုပ်ပါ။
Boost + & Boost - နက်ရှိုင်းစွာမြှင့်တင်ရန် & 1-ကိုထိပုတ်ပါထပ်တိုးခြင်းအားဖြင့်သင့်ဖုန်းကိုဖွင့်မြန်စေ ..
သတိပေးချက် Cleaner - သင့်ရဲ့ဖုန်းအားလုံးကိုအမှိုက်သရိုက်အကြောင်းကြားစာဖယ်ရှားပါ။
CPU ကို Cooler - CPU ကိုဆင်း Cool ။
သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ပါ
App ကို Lock ကို - မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိသမျှသင့် privacy app များကိုသော့ခတ်။
Apps ကပ Hide - မျက်နှာပြင်ကနေ privacy ကို app များကို Hide ။
🔧 အသက်အဘို့အအသုံးဝင်သော tool များကို
widgets - launcher Widgets တွေ & system ကို Widgets တွေအဘို့အ Menu ကို။
မိုးလေဝသ - သင့်မြို့၏ရာသီဥတုအဘို့အ Precise ခန့်မှန်း။
သတိပေးချက် Toolbar ကို - က Wi-Fi ကို, ဒေတာလက်နှိပ်ဓာတ်မီး, တိုးတက်မှု, CPU အေးနှင့်ဘက်ထရီမှလျင်မြန်စွာလက်လှမ်း။
Searchbar - က Google search engine ကို။
အားလပ်ချိန်အပန်းဖြေဘို့ Entertainment က
အွန်လိုင်းဂိမ်း - 20 + ပျော်စရာအဘို့အအွန်လိုင်း H5 ဂိမ်းများကို။
android ဖုန်းအဘို့အတင့်တယ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် 3D နောက်ခံပုံများ, ပြောင်းလဲနေသောခေါ်ဆိုခမျက်နှာပြင် themes များ, ချစ်စရာ launcher ရုပ်ပြောင်ဆောင်ပုဒ်နှင့်ချစ်ခြင်းရုပ်ပြောင်။ သင်လိုအပ်အားလုံးဖွင့်တင် IN ဤသည်၌ပါ! Launcher ကို IN Get - အီမိုဂျီ Theme, မတ်ေတာသညျအီမိုဂျီ GIF များနှင့်စတစ်ကာများ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ပင်မမျက်နှာပြင်စတိုင်ကိုရှာဖွေ!
ဒီ launcher app ကိုသင့်ရဲ့ default home screen ကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်နှင့် System Setting ထဲမှာရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်ပေးပါ။ ရှာဖွေရေးဘား app ထဲမှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဖြစ်ကိုလည်း Google ကအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Launcher ကို IN အချစ် - ရုပ်ပြောင် & GIF များ, Themes
20.50 ကို MB
ONE App ကိုရေးအဖွဲ့
ရုပ်ပြောင်တင်ပေးသူ - ...
Launcher ကို Bling - ...
အရောင် Flash ကို ...